Qaraxyo Ciidamada AMISOM Lagula Beegsaday Gobollada Banaadir iyo Sh/Hoose.
Qaraxyo khasaara dhaliyay ayaa ciidamo katirsan shisheeyaha AMISOM lagula beegsaday Koonfurta dalka Soomaaliya oo ay duullaan ku joogaan.
Maanta duhurkii qarax ka dhacay isgoyska SOS ee magaalada Muqdisho ayaa lala helay gaari Gaashaaman oo ay la socdeen ciidamo katirsan AMISOM, goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu waxyeelleeyay gaari Taaw ah oo wadada marayay.
Dhinaca kale qarax xooggan ayaa ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda lagula beegsaday wadada xiriirisa degmada Buula Mareer iyo deegaanka Golweyn ee Sh/Hoose, ugu yaraan sedax askari ayaa la sheegay in ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarkaasi.
Ciidamada dhintay ayaa iyagoo lugeynaya lakulmay qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay. Qaraxyada waddooyinka hareerahooda lagu aaso ayaa halakeeyay isku socodka gaadiidka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya kusoo duulay.